Fanafihana sy vono olona :: Mpanampy an-trano maty notifirin’ny jiolahy - ewa.mg
Fanafihana sy vono olona :: Mpanampy an-trano maty notifirin’ny jiolahy
News - Fanafihana sy vono olona :: Mpanampy an-trano maty notifirin’ny jiolahy
Notafihin’ny jiolahy efatra nitondra basy ny tokantrano iray, tany Ambohitromby, tamin’ny 5 jona lasa teo. Vao nivoha ny varavaran’ilay trano avy nopoirin’izy ireo, tokony ho tamin’ny misasak’alina, dia notifiriny avy hatrany ny mpanampy iray tao an-trano. Rotiky ny balana basimborona tamin’ ny vatany ka namoy ny ainy teo no ho eo io vehivavy io.
Tsy nanaiky mora ny tompon-trano nahita izany fa namaly nitifitra ihany koa. Raikitra ny fifandonana taorian’izay. “Resy tosika ireo jiolahy, nony minitra maro taty aoriana. Lavo tamin’ny tany ny iray tamin’izy ireo rehefa niantefan’ny balan’ny tompon-trano. Nentin’ireo namany nitsoaka ilay naratra. Vola telo alina ariary sendra nipetraka teo ambony latabatra no lasan’izy ireo nitsoaka”, hoy ny loharanom-baovao. “Tsy nanaiky hamoha ny varavaran’ ny trano io mpanampy io rehefa norahonan’ireo jiolahy avy tany ivelany, ka izay no heverina ho antony namonoan’ireo mpanafika azy noho ny hatezerana”, hoy ny mponina any an-toerana raha nitantara ny zava-nitranga tamin’ny antso an-tariby.
L’article Fanafihana sy vono olona :: Mpanampy an-trano maty notifirin’ny jiolahy est apparu en premier sur AoRaha.
Fihaonamben’ny lehiben’ny: tafika Takin’ny PM ny hamerenana malaky ny fandriampahalemana
Nanentana ny firaisankinan’ny samy mpitandro filaminana ny Praiminisitra (PM) Ntsay Christian mba hahatontosa ao anatin’ny fotoana fohy ny fampanjakana ny fandriampahalemana nandritra ny andro faharoa sady farany amin’ny fihaonamben’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Tafika Malagasy, omaly…Fihaonambe nanaovana tatitra ny zava-bita, ny taona 2020 ary andrai­san’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Etamazaoro telo mandrafitra ny Tafika. Tonga nanotrona ity fivoriana, omaly, ity ny PM ka nampitany mi­vantana amin’ireto tompon’ andraikitra ireto ny asa sy ireo vokatra andrasana amin’izy ireo. Nanakasitraka manokana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jly Rakotonirina Richard izy noho ireo zava-bita tamin’ity taonaa ity ary nisaotra koa ny Tafika tamin’ ireo ezaka hamerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto amin’ny fire­nena. Tsikaritra fa nihena ny tahan’ny tsy fandriampahalemana amin’izao fotoana izao na eny ambanivohitra na an-drenivohitra. Fanamby efatra lehibe no apetraka eto amin’ ny firenena ary izany dia mila ny fandraisan’andraikitry ny Tafika izay tokony hanakaiky hatrany ny vahoaka, araka ny nambarany.Hamafisina ny fiarovana ny ranomasina… Voalohany, ny fampijo­roana ny fiandrianam-pire­nena izay adidy masina ian­tsorohan’ny Tafika ka mitaky ny fanajana ny rafitra sy ny an­drimpanjakana misy eto amin’ny firenena. Ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriampahalemana no fanamby faharoa, izay anjara asa fo­totry ny Tafika. « Matoky ny Foloalindahy ny vahoaka taorian’ny fametrahana ireo rafitra samihafa toy ny ZRPS, ny Base opérationnelle avancée ary ny fanaovana fanaraha-maso manerana ny tanàna », hoy izy. Nohamafisiny kosa ny fanamby amin’ny fiaro­vana ny fari-dranomasina, izay fanamby fahatelo apetraky ny fitondram-panjakana amin’ny Tafika. « Nosy isika ary mila mametraka paikady hampanjariana ny filaminana sy ny fandriampahalemana eny an-dranomasiina mba hahafahana manatsara ny fiarovana ny sisin-tany. Hape­traka eo am-pelatanan’ny Tafika ny famaritana ny zone maritime prioritaire d’intervention na ZMPI hahafahana miaro ny harenantsika », hoy izy.Jean ClaudeL’article Fihaonamben’ny lehiben’ny: tafika Takin’ny PM ny hamerenana malaky ny fandriampahalemana a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Chan 2021»: hijery ireo lalao manasa-dalana i Ahmad
Taorian’ny fahafahan’i Ahmad tamin’ny sazy napetraky ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) ka niverenany amin’ny asany maha filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina (Caf) azy indray, fantatra fa hijery ireo lalao manasa-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ireo mpilalao tsy matihanina “Chan 2021” ny tenany. Fihaonana hotanterahina any Kameronina, amin’ity alarobia ity.Hiseho vahoaka indray izany i Ahmad, rehefa nisitrika tsy hita mihitsy nandritra ny volana vitsivitsy. Raha hiverenana kosa ireo lalao roa ireo, hanokatra izany ny fifandonan’ny Voromaherin’i Mali sy i Ginea, izay hatao ao amin’ny kianja Japoma. Tsiahivina fa i Mali, nandresy an’i Kongo Brazzaville, tamin’ny fandakana ny “tirs au but”, 5 no ho 4 teo amin’ny ampahefa-dalana ary resin’i Ginea tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 kosa i Roandà. Ny ankatoky ny famaranana faharoa indray, hifanandrinan’i Kameronina sy i Maraoka. Ny Maraokanina, nanilika an’i Zambia, tamin’ny isa 3 no ho 1 ary Kameronina, nanilika an’i RD Kongo, 2 no ho 1. TompondakaL’article Kitra – «Chan 2021»: hijery ireo lalao manasa-dalana i Ahmad a été récupéré chez Newsmada.
Agnaborano: lehilahy nahatrarana vola sandoka 2 tapitrisa Ar
Lehilahy iray 31 taona avy any Ambilobekely kaominina Manambato distrikan’Ambilobe no tratran’ny zandary avy ao amin’ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena ao Angnaborano Ifasy noho ny fampiasana vola sandoka amin’ny ravim-bola 20 000Ar miisa 105 mitotaly 2 100 000Ar. Nosamborin’ny zandary avy hatrany ity lehilahy ity ka nandritra ny famotorana azy no nilazany fa efa nampiasa vola sandoka maro izy tao amin’ny tsenan’omby ao Agnaborano Ifasy. Maro amin’ireo vola sandoka ireo rahateo no efa miparitaka ao an-tsena, araka ny fanazavany nandritra ny famotoran’ny zandary. Nanamafy ny zandary fa melohin’ny lalàna asa an-terivozona mandra-pahafaty ny fanamboarana sy fampiasana ary fitahirizana vola sandoka. Koa entanina ny mponina rehetra ao an-tanànan’Agnaborano sy ao amin’ny faritra Diana rehetra mba ho mailo ary hampilaza avy hatrany amin’ny tompon’andraiki-panjakana ao an-toerana raha mahita vola sandokaJ.CL’article Agnaborano: lehilahy nahatrarana vola sandoka 2 tapitrisa Ar a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19: Situation du 22 Septembre 2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 22 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Selon les données statistiques du Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 de ce 22 Septembre 2020, les nouveaux cas des dernières 24h sont au nombre de 63 sur 598 tests effectués, portant à 1165 le nombre de cas actifs actuels dont 20 présentent des formes graves. La majorité des nouveaux cas sont localisés dans la région de Sava avec 25 cas, suivi de Alaotra Mangoro avec 13 cas, la région Diana avec 9 cas, la région vatovavy Fitovinany avec 3 cas, la région Analamanga avec 6 cas et la région de Boeny avec 1 cas. Quant aux guérisons, 61 cas de guérisons ont été également annoncés par le Pr Vololontiana, de ce fait sur 16 136 personnes contaminées du Coronavirus dans toute la Grande Île, 14 743 personnes sont totalement rétablies du Covid-19. 1 décès liés au Covid-19 a été rapporté par la porte-parole du CCO Covid-19, depuis le début de l’épidémie en mars 2020, le nombre de décès liés au coronavirus à Madagascar est de 226L’article Covid-19: Situation du 22 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Konferansa momba ny soratra: ho maroloha ny lohahevitra
Tafiditra amin’ny andiany fahatelo ilay hetsika lehibe « Konferansa momba ny soratra ». Ho maroloha ny lohahevitra hovelabelarina satria hahatratra 6 ireo handaha-teny amin’izany. Tsy mbola fantatra izy ireo fa antso no ataon’ny vondrona Koloiko sy Hajaiko ny Teniko (mpikarakara ny hetsika). Izay te hitondra velakevitra amin’ity andiany fahatelo ity, tokony handefa ny lohahevitra sy ny lahatsoratra mirakitra ny famelaberaran-kevitra hataony mandritra ny konferansa. Ry zareo mpikarakara no hifantina izany avy eo. Raha ny vina napetraka, ny 16 novambra izao no hanatanterahana ny « Konferansa momba ny teny 2019 » ao amin’ny Haitsiron’Iarivo eny Alarobia. Fotoana tsara ho fantatra– Farany fandefasana ny famintinana: 17 aogositra 2019– Farany fandefasana ny lahatsoratra feno: 28 septambra.– Famoahana ny anaran’ireo voafantina: 6 oktobra.– Fandefasana ny fanamarihana sy fanitsiana ny lahatsoratra any amin’ireo mpamelabela-kevitra: 10 oktobra.– Daty farany fandefasana ny lahatsoratra voahitsy any amin’ny Koloiko sy hajaiko ny teniko: 14 Oktobra.– Fisoratana anarana hanatrika: 6 oktobra – 4 novambra.– Famoahana ny antsipirian’ny fandaharam-potoana mandritra ny konferansa: 5 Novambra.– Datin’ny konferansa: 16 NovambraHaRy Razafindrakoto L’article Konferansa momba ny soratra: ho maroloha ny lohahevitra a été récupéré chez Newsmada.
Fahatrarana andian-jiolahy :: Tafatsoaka indray i Del kely, dimy lahy mpiambina azy voasambotra
Tafaporitsaka tao anatin’ny vela-pandriky ny mpitandro filaminana ilay jiolahy raindahiny mpaka an-keriny ao amin’ny faritra Betsiboka hatrany Tsaratanàna sy Andilamena antsoina hoe Del kely, omaly vao maraina be, tokony ho tamin’ny 1 ora tany Mahatsinjo-Andriba amin’ny lalam-pirenena faha-4. Nihaona tamin’ny vady aman-janany io jiolahy io no izao tafaporitsaka izao. Azo sambo-belona, taorian’ny fifampitifirana, ireo mpiambina azy miisa dimy miaraka amin’ny basy mahery vaika marika “Mas 36” iray feno bala sy basimborona iray ary balana basy “kalachnikov” iray. Ity Del kely ity no voalaza fa raindahiny tamin’ireo fakàna an-keriny maro nitranga tany Tsaratanàna sy Andilamena tato anatin’ny taona vitsy izay. Isan’ireo ny fakàna an-keriny an’ireo mpiasan’ny Kraoma. Izy koa no tompon’antoka tamin’ny fakàna an-keriny an’ilay mpitsabo mpanampy tamin’ny fiandohan’ity taona ity. Misy ny fanambazana vola an-tapitrisany maro avy amin’ny fanjakana sy ny Zandarimaria ho an’izay manampy amin’ny fisamborana azy saingy tsy mbola nisy vokany izany hatreto. L’article Fahatrarana andian-jiolahy :: Tafatsoaka indray i Del kely, dimy lahy mpiambina azy voasambotra est apparu en premier sur AoRaha.
Hetsiky ny polisin’ny Sag…: jiolahy telo nahatrarana gony feno entan-dakozia
Noraisim-potsiny! Manamafy ny hetsika efa fanaony ny polisy miasa ao amin’ny Sag Anosy amin’ny fisafoana ireo faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana, toy ny eny Anosibe sy eny Tsarasaotra. Afakomaly tokony ho tamin’ny 3 ora maraina teo amin’ny faritr’i Paraky Tsarasaotra, nahatsikaritra telo lahy ny polisy. Somary nampiahiahy anefa ny fihetsik’izy ireo niaraka amin’ny gony be ka niroso amin’ny fisavana azy ireo ny polisy. Nandritra izany no nahitan’ny polisy “barre à pince”, varavarana aliminioma roa, baramina ary fitaovana fampiasa an-dakozia, famantaranandro fametaka amin’ny rindrina, natao tanaty gony avokoa ireto entana halatra ireto. Nentina nanaovana fanadihadiana avy hatrany ry zalahy ka talin’izany ny nilazan’izy ireo fa entana vao avy nangalarina sy varavarana tamina trano iray tsy lavitra ity novakin-dry zalahy ity ilay varavarana aliminioma io. Niaiky ny heloka vitany izy ireo nandritra ny famotorana nataon’ny polisy ary efa ela ny nanaovany ity asa ratsy ity. J.CL’article Hetsiky ny polisin’ny Sag…: jiolahy telo nahatrarana gony feno entan-dakozia a été récupéré chez Newsmada.
Karohina fatratra ilay mpamily: mpitondra moto maty voafaokan’ny fiara
Nandriaka indray ny ra teny Andraharo, ny alin’ny asabotsy teo tokony ho tamin’ny 08 ora alina. Tra-doza tamin’izany ny lehilahy iray 35 taona nitondra moto. Voadonan’ny fiara iray teny an-toerana izy ka maty teo no ho eo, raha ny filazan’ireo nanatri-maso. Mafy ny fifandonana teo amin’ny roa tonta ka tsy naharo an’ilay lehilahy tra-doza intsony ny aroloha nanaovany. Vokany, vaky tanteraka ny lohany ary maty tsy tra-drano izy. Ilay fiara nahavanon-doza kosa nitsoaka avy hatrany vao nahita an’ilay mpitondra moto nianjera sy naratra mafy. Taorian’izay, tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nijery ny zava-misy. Nisokatra ihany koa ny fanadihadiana. Miparitaka ao amin’ny tambajotran-tserasera ihany koa ny laharan’ilay fiara nahavanon-doza ary karohina hatramin’izao. Ny vata-mangatsiak’ilay mpitondra moto kosa nalefa teny amin’ny tranom-patin’ny HJRA. Efa fantatra ny mombamomba azy ary efa nijery izany teny an-toerana ny fianakaviany. Henintsoa HaniL’article Karohina fatratra ilay mpamily: mpitondra moto maty voafaokan’ny fiara a été récupéré chez Newsmada.
Ramamimampionona Gérard : “Ho an’ny manan-tsaina ny fananganan-tsaina”
“Natao ho an’ny olona manan-tsaina ny fananganan-tsaina. Manana ny lamba na ny faneva fotsy,mena,maitso. Mahalala sy mahatadidy ny dikany, manambara fiombonana, fihavanana, fitiavan-tanindrazana, asa… Eo koa ny fikirizana, ny fanantenana, ny soa iombonana… “, hoy ny filoha lefitry ny CFM, Ramamimampionona Gérard. Tsy miankina amin’ny mpitondra fanjakana izany, fa amin’ny maha Malagasy: atsangana ny saina. Tsy ijerena ny manodidina koa izany, ka izay mampiray indray no mampitabataba na mety hampiady. Tsy natao hampiady ny saina fa mampiombona.Isan-taona ve dia entanina amin’ny fananganan-tsaina? Mahatadidy ny raiamandreny. Manan-tsaina ve? Mahalala ny antony sy ny ananganana azy ary izay raketiny. Marika sy vavolombelon’ny fitiavanan-tanindrazana sy fahavononana hijoro sy hampijoro ny fahaleovantena. Tsy misy fahaleovantena tonga ho azy, raha tsy ny isam-batan’olona miakatra tsikelikely no manorina sy mandrafitra azy.Tsy mbola very fanantenana “Na inona na inona antony, fantatsika fa mahantra ny firenentsika ara-politika, toekarena, sosialy… Ao anatin’izany no vao mainka hananganan-tsaina, fa tsy mbola very fanantenana isika”, hoy izy. Mbola misy ny toe-tsaina sy ny finiavana tsara. Eo koa ny harena nomen-Janahary, ny fihavanana… Izay no ahazoana mijoro, ary ananganan-tsaina.Ny fotsy, milaza ny fihavanana, ny fahadiovana, ny fahamarinana… Izay no enti-manangana ny fahaleovantena. Ny ra latsaka teo amin’ny fitiavana tanindrazana sy ny sorona vitan’ny raiamandreny teo aloha ny mena. Na ho fanajana ny teo aloha noho izany ihany aza: atsangana ny saina. Ny maitso: fanantenana. Tsy manary fanantenana izany ny olombelona, raha mbola velona.R.Nd.L’article Ramamimampionona Gérard : “Ho an’ny manan-tsaina ny fananganan-tsaina” a été récupéré chez Newsmada.
IOGA en grève : Aucune information sur le séisme d’hier
Le personnel de l’IOGA refuse de donner des informations sur le séisme d’hier. Un séisme a été ressenti, hier, aux alentours de 2h par les populations d’Analamanga et d’Itasy. Selon les témoignages, l’intensité du phénomène varie en fonction de la zone géographique. Des habitants de la région Itasy, par exemple, ont fait savoir que les «secousses» étaient assez conséquentes. Pour la population d’Antananarivo, les secousses en question, bien que moins importantes, ont été ressenties dans plusieurs quartiers d’Analamahitsy à Ambohimangakely. Selon les dires de ceux qui ont pu ressentir le phénomène, deux fréquences de secousse de quelques secondes ont été notées. De son côté, l’IOGA ou Institut et Observatoire de Géophysique d’Antananarivo «n’est pas en mesure de fournir des informations concernant le séisme d’hier». Joint au téléphone, un technicien nous a fait savoir que «le personnel est actuellement en grève et que la communication sur le phénomène devrait être du ressort d’un agent officiellement recruté par l’État. Alors qu’il n’y en a pas actuellement auprès de l’Observatoire». Par ailleurs, notre source fait savoir que «le séisme aurait pu être causé par un effet domino dû au séisme qui s’est tenu à Mayotte». Avant de préciser que les séismes ne sont pas «d’origine volcanique à Madagascar contrairement à ce que beaucoup pourraient penser». D’ici la fin de la grève du personnel de l’IOGA, les citoyens sont dans l’expectative quant aux informations sur le tremblement de terre survenu hier. José Belalahy L’article IOGA en grève : Aucune information sur le séisme d’hier est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article IOGA en grève : Aucune information sur le séisme d’hier a été récupéré chez Midi Madagasikara.